Nepal Khabar – Page 2
जिब्रोको यस्तो अवस्थाले थाहा हुन्छ तपाईमा भएको रोग, जानी राखौं र जानकारीको लागि सेयर गरौं
सुतिरहेकी घरबेटीकी छोरीको मस्त जवानी देख्दा खप्न नसकेर भयो यस्तो घटना (हेर्नुहोस भिडियो)
लाज नमानी पढ्नुस, यि हुन से*क्समा चरमसुख प्राप्त गर्ने तरिका, हेर्नुहोस महत्वपुर्ण जानकारी भिडियोमा
तपाईलाई थाहा छैन होला: यस्ता थिए प्राचीन समयमा ७ अनौठा यौ’न’प्रथा, लाज नमानी हेर्नुहोला
October 21, 2020 adminLeaveaComment on तपाईलाई थाहा छैन होला: यस्ता थिए प्राचीन समयमा ७ अनौठा यौ’न’प्रथा, लाज नमानी हेर्नुहोला
तपाईलाई थाहा छैन होला: यस्ता थिए प्राचीन समयमा ७ अनौठा से’ क्स प्रथा, लाज नमानी हेर्नुहोला// हामीमध्ये धेरैजसो वर्तमान समयको ‘से क्स ट्रेन्ड्स’ अर्थात् यौ’ न प्रथाबारे जानकार छौं होला । तर धेरैलाई थाहा नहोला, सेक् सको अनौठो प्रथा शताब्दीऔँ पहिलेदेखि थियो । जान्नुहोस्, ती ७ अनौठो प्रथा बारे । १ लिपिस्टक र ओरल से […]
फेरि बाहिरियो हेर्नै नसकिने नेपाली चेलीको बिदेशी यौन-काण्ड, १८+ ले मात्र हेर्नुहोला
October 15, 2020 adminLeaveaComment on फेरि बाहिरियो हेर्नै नसकिने नेपाली चेलीको बिदेशी यौन-काण्ड, १८+ ले मात्र हेर्नुहोला
फेरि बाहिरियो हेर्नै नसकिने नेपाली चेलीको बिदेशी यौन-काण्ड, १८+ ले मात्र हेर्नुहोला *नोट :नोट : यो शिर्षकको सम्बन्धित भिडियो अन्तिममा राखिएको छ हेर्नुहोला l यो पनि पढ्नुस : क्यान्सर, यौन दुर्बलता, मुटु रोग जस्ता समस्याहरुबाट छुटकारा पाउन पोलेको लसुन::::: लसुन प्राय सबैको भान्सामा पाइने एक प्रकारको सब्जी तथा मसला हो । लसुन खानाले हुने फाइदाका […]
October 15, 2020 adminLeaveaComment on घरमा एक्लै हुँदा केटीहरुले यस्तो हर्कत गर्छन्, जुन सुन्दै अचम्म लाग्छ !
घरमा एक्लै हुँदा केटीहरुले यस्तो हर्कत गर्छन्, जुन सुन्दै अचम्म लाग्छ ! हामी घरमा अथवा कोठामा एक्लै भयौं भने के गर्छौं रु टिभी हेर्छौं, पार्टी गर्छौं अथवा मोजमस्तीका अन्य केही विकल्पहरु । तर केटीहरु घरमा एक्लै हुँदा के गर्छन् होला ?यस्ता छन् केही केटीका बारे रोचक तथ्यहरु जब घरका सदस्यहरु बाहिर जान्छन् या एक्लै हुन्छन् […]
दुई दिनभित्र तपाईंको काम बन्नेछ, बिल्कुलै बेवास्ता नगरि देख्ने बित्तिकै ॐ लेखी सेयर गर्नुहोला परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलि’ङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन । अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिं’गलाई पुजा गर्छन् । सबैलाई संस्कृतको ज्ञान पनि हुँदैंन । आउनुस् यसको अर्थ […]
October 15, 2020 adminLeaveaComment on राती सुत्दा भान्सा कोठामा किन कहिल्लै जुठो भाडा राख्नु हुँदैन ? जानी राखौं
राती सुत्दा भान्सा कोठामा किन कहिल्लै जुठो भाडा राख्नु हुँदैन ? जानी राखौं १) खाना खाएपछि भान्सा कोठामा जुठो भाडा कहिले नराख्नुहोस् । यदि रातमा भाडा माझ्न सकिदैन भने पानीले पखालेर मात्र भएपनि राख्नुहोस् तर जुठो नराख्नुहोस् । जुठो राख्नाले धन हानी हुन्छ । २) घरको मुख्य ढोका अगाडी फोहोर कहिले नराख्नुहोस, यसो गर्नाले छिमेकी शत्रु बन्न पुग्छन्। ३) घरमा […]
सावधान !! यस्तो बानीले ज्यानै जान सक्छ, सबैको जानकारीको लागि सेयर गरौं
October 15, 2020 adminLeaveaComment on सावधान !! यस्तो बानीले ज्यानै जान सक्छ, सबैको जानकारीको लागि सेयर गरौं
सावधान !! यस्तो बानीले ज्यानै जान सक्छ, सबैको जानकारीको लागि सेयर गरौं सामान्यतया सबै खाले रोगव्याधबाट जोगिन चिकित्सकदेखि घरपरिवारका ठूलाबडाले हात सफा राख्ने सल्लाह दिन्छन्। सबै भन्छन्, ‘हात सफा राख। दिसा–पिसाब गरेपछि साबुनले हात धोऊ, खाना खानुअघि हात धोऊ।’ भनिन्छ हात सफा भए कीटाणू फैलिँदैनन्। खानेकुरा बेच्नेहरूले अझ बढी हात सफा राख्नुपर्छ। तर, यथार्थमा हुन्छ […]
दैनिक १० करोड कमाई हुने पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको यस्ता छन आमदानीका स्रोतहरु
October 15, 2020 adminLeaveaComment on दैनिक १० करोड कमाई हुने पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको यस्ता छन आमदानीका स्रोतहरु
दैनिक १० करोड कमाई हुने पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको यस्ता छन आमदानीका स्रोतहरु भिडियाे अन्त्यमा छ,नेपाली श्रीमान प्रदेशमा बितेपनि नेपालमै एकल जीवन बाँचिरहेकी फिलिपिनी बुहारीफिलिपिन्सकी २९ वर्षीय रुजान जोय र धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-१० का मोहम्मद मजहर दुबै कतारको एकै कम्पनीमै बिक्रेताको काम गर्थे । एकै कम्पनीमा एकैसाथ एउटै प्रकृतिको काम गर्दा उनीहरूबीच प्रेम भयो ।दुवै अलग-अलग […]